Wararka - Eray bixinta hawada kombaresarka iyo aqoonta la xiriirta
(1), cadaadis: cadaadiska lagu tilmaamay warshadaha kombaresarada waxaa loola jeedaa cadaadiska (P)
Ⅰ, Cadaadiska caadiga ah ee atmospheric (ATM)
Ⅱ, cadaadiska shaqada, nuugid, cadaadiska qiiqa, waxaa loola jeedaa nuugid kombaresarada hawada, cadaadiska qiiqa
① Cadaadiska lagu qiyaasay cadaadiska atmospheric sida barta eber waxaa loo yaqaan cadaadiska dusha P (G).
② Cadaadiska leh vacuum buuxa sida barta eber waxaa loo yaqaan cadaadiska saxda ah P (A).
Cadaadiska qiiqa sida caadiga ah lagu bixiyo saxanka kombaresarka waa cadaadiska cabbirka.
Ⅲ, cadaadis kala duwan, cadaadis kala duwan
Ⅳ, cadaadiska oo luma: cadaadiska oo luma
Ⅴ, kombaresarada hawada, beddelka unugga cadaadiska inta badan la isticmaalo:
1atm (cadaadiska jawiga caadiga ah) = 1.013bar = 0.1013MPa
Caadi ahaan warshadaha kombaresarada hawada, "kg" waxaa loola jeedaa "bar".
(2), socodka magaca: socodka magaca ah ee Shiinaha waxa kale oo loo yaqaan socodka barokaca ama socodka magaca.
Guud ahaan, marka la eego cadaadiska qiiqa loo baahan yahay, mugga gaaska ee uu soo saaro kombaresarada hawada halkii waqti halbeeg ayaa loo beddelaa heerka qaadashada, taas oo ah qiimaha mugga cadaadiska nuugista iyo heerkulka nuugista iyo qoyaanka marxaladda koowaad ee tuubada qaadashada. Waqtiga cutubku wuxuu tilmaamayaa hal daqiiqo.
Taasi waa, mugga nuugista Q= CM *λ*D3*N=L/D*D3N
L: Dhererka rotor
D: Dhexroorka rotor-ka
N: Xawaaraha usheeda dhexe ee rotor
CM: Isku xidhka khadka astaanta
Lambda: dhererka ilaa dhexroorka saamiga
Marka loo eego heerka qaranka, mugga qiiqa dhabta ah ee kombaresarada hawadu waa ± 5% socodka magaca ah.
Gobolka tixraaca: Cadaadiska jawiga caadiga ah, heerkulka 20℃, qoyaanku waa 0℃, gobolkan tixraaca ee Maraykanka, Ingiriiska, Australia iyo wadamada kale ee Ingiriisiga ku hadla T = 15 ℃. Yurub iyo Japan T = 0 ℃.
Xaaladda caadiga ah: hal jawi caadi ah, heerkulka 0℃, qoyaan 0
Hadii loo rogo heerka saldhiga, unuggu waa:m3/min (kubickiiba)
Haddii loo rogo gobolka caadiga ah, unuggu waa: Nm3/min (isku wareeg ah halkii daqiiqo)
Ka dib 1 m/min = 1000 l/min
1 nm kadib/daqiiqo kadib = 1.07 m/min
(3) Saliida ku jirta gaaska:
Ⅰ, per mugga halbeegga hawada cufan ee saliidda (oo ay ku jiraan saliidda, qaybo la hakiyey iyo uumiga saliidda), tayada beddelka in off cadaadiska 0.1 MPa, heerkulka waa 20 ℃ iyo qoyaan qaraabo ah 65% qiimaha heerka caadiga ah. xaaladaha jawiga. Cutub :mg/m3 (waxaa loola jeedaa qiimaha lamaanaha ee dhammaystiran)
Ⅱ, PPM waxay sheegtay in walxaha raadraaca ee ku jira isku dhafka calaamadaha, ay tilmaamayso tirada hal milyan oo milyan oo kasta (miisaanka PPMw iyo mugga ka badan PPMv). (iyadoo la tixraacayo saamiga)
Caadi ahaan waxaan u tixraacnaa PPM sida saamiga miisaanka. (Hal milyan oo kiilogaraam ah waa milligram)
1PPMW = 1.2mg/m3 (Pa = 0.1MPa, t=20℃, φ=65%)
(4) Awood gaar ah: waxaa loola jeedaa awoodda uu cunay mugga mugga go'an ee kombaresarada. Waa nooc ka mid ah index si loo qiimeeyo waxqabadka kombaresarada ee hoos cadaadiska gaaska iyo cadaadiska isku midka ah.
Awood gaar ah = quwadda shafka (wadarta awoodda wax gelinta) / qiiqa (kW/m3 · min-1)
Awoodda shaft: Awoodda loo baahan yahay in lagu kaxeeyo shafka kombaresarada.
dhidibka P =√3×U×I× COS φ(9.5)×η(98%) motor ×η waditaanka
(5), koronto iyo ereyo kale
Ⅰ, awood: hadda halkii halbeeg wakhtiga lagu qabanayo shaqada (P), unugga waa W (watt
Sida caadiga ah waxaan isticmaalnaa kW (kilowatt), laakiin sidoo kale awood faras (HP)
Ⅱ, hadda: elektarooniga hoos yimaada ficilka xoogga goobta korantada, waxaa jira xeerar u dhaqaaqid hal jiho
Marka ay dhaqaaqdo, waxay ka samaysaa hadda A ee Amperes.
Ⅲ, danab: kaliya sababtoo ah waxay leeyihiin socodka madaxa iyo biyaha, sidoo kale waxaa jira farqi suurtagal ah,
Waxa loo yaqaan danab (U), unugguna waa V (volts).
Ⅳ, wejiga, waxa loola jeedaa silig, saddex weji afar silig: waxa loola jeedaa dunta wejiga saddex (ama silig)
Xariiqda dhexe (ama xariiqda eber), hal waji waxa loola jeedaa xariiqda wejiga (ama xariiqda dabka)
Xariiqda dhexe ee xididka (ama xariiqda eber)
Ⅴ, inta jeer: beddelka hadda (ac) si loo dhamaystiro xoogga korantada ee wareegyada isbeddelka togan iyo kuwa taban lambarka labaad, isticmaal (f), sida ku cad cutubka - Hertz (Hz) ee 50 Hz beddelka soo noqnoqda ee dalkeenna, dibadda waa 60 Hz.
Ⅵ, inta jeer: bedesho inta jeer ee, codsiga kombaresarada hawada, adoo bedelaya inta jeer ee awoodda si loo beddelo xawaaraha matoorka, si loo gaaro ujeedada hagaajinta socodka. Heerka socodka waxaa lagu hagaajin karaa 0.1bar iyadoo loo beddelayo soo noqnoqoshada, taas oo si weyn u yaraynaysa shaqada shaqo la'aanta ah oo gaadhaysa ujeedada badbaadinta tamarta.
Ⅶ, Controller: waxaa jira laba nooc oo waaweyn oo ka mid ah kontaroolayaasha warshadaha: Nooca qalabka iyo PL
Nidaamka, waxaan isticmaalnaa PLC controller, waa nooc ka mid ah by
Kantaroole barnaamijaysan oo ka kooban kombuyuutar yar oo chips ah iyo qaybo kale.
Ⅷ, Horyaalka tooska ah: isku xirka tooska ah, warshadaha kombaresarada hawada waxaa loola jeedaa isku xirka
Ⅸ, rarista/dejinta, xaalada shaqada kombaresarada hawada, guud ahaan waxa loola jeedaa kombaresarada hawada
Habka dhammaystiran ee nuugista iyo qiiqa ayaa ku jira xaaladda loading, haddii kale waxay ku jirtaa xaaladda dejinta
Ⅹ, hawo/biyo: waxaa loola jeedaa habka qaboojinta
Ⅺ, qaylada: halbeeg: dB (A) (+ 3) (dB) unugga heerka cadaadiska dhawaaqa
Ⅻ, darajada ilaalinta: waxa la yidhi qalabka koronto ee boodhka ka celinaya, ka hortagga jidh shisheeye, biyuhu, iwm
Qiimaha heerka xajinta hawada waxaa muujiyay IPXX
Ⅷ, qaabka bilowga: bilaw toos ah, badanaa ku bilow habka beddelka saddexagalka xiddigta.
(6) Cutubka heerkulka barta sayaxa ℃
Hawada qoyan ee qaboojinta cadaadiska sida, samee asal ahaan ka kooban uumiga biyaha unsaturated ee hawadu waxay noqotaa heerkulka uumiga oo buuxa, si kale haddii loo dhigo, marka la dhimo heerkul gaar ah, heerkulka hawada hawadu wuxuu ka kooban yahay uumiga biyaha unsaturated si uu u gaaro heerka saturation (saturation state). kuwaas oo uumiga bilaabaa inuu liquefaction, dareere soo baxaan), heerkulku waa heerkulka barta sayaxa ee gaaska.
barta sayaxa cadaadiska: waxaa loola jeedaa gaaska leh cadaadis gaar ah oo lagu qaboojiyey heerkul gaar ah, uumiga biyaha aan dhergin ee ku jira wuxuu noqdaa roobka uumiga biyaha saturated, heerkulku waa barta cadaadiska gaaska.
Barta sayaxa atmospheric: marka la eego cadaadiska jawiga caadiga ah, gaasku wuu qaboojiyaa si aanay waxa ku jira u buuxin
Uumiga biyuhu waxa uu noqdaa uumi biyo buuxa oo ku neefsada heerkul
Warshadaha kombaresarada hawada, barta sayaxa waa heerka qallayl ee gaaska
Waqtiga boostada: Nov-03-2021